समावेशीकरण वा एक LLC गठनको कर विचारहरू
हामी कर्पोरेसन र सीमित देयता कम्पनीहरूको समावेश र तुलनाको महत्त्वपूर्ण कर विचारहरूको मुख्य भिन्नता, फाइदा र फाइदाहरू जाँच्दैछौं। यी दुई एन्टिटीले सुविधाहरू साझा गर्दछन् र व्यापक भिन्नताहरू छन् जुन ध्यानपूर्वक तौल गरिनु पर्छ।
"सबै कर सुविधाहरू समान बनाइने छैनन्। तपाइँको लागि सहि संयोजन फेला पार्नु आवश्यक छ।"
हामीले एलएलसीको तुलनामा कर्पोरेसनहरूबारे मात्र छलफल गरेर थोरै शाखा बनाउने छौं र एउटा करलाई एउटा भिन्न कर वर्गीकरणको साथ एउटा कर्पोरेशन पनि समावेश छ, सब अध्याय एस निगम। एक मानक "C" निगम कर्पोरेट स्तरमा कर लगाईन्छ। यसको मतलव यो छ कि निगमले आफ्नै ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्दछ र ट्याक्सहरू आफै भुक्तान गर्दछ। एक सी निगम को शेयरधारकहरु आय बाट र व्यापार बाट वितरण मा कर तिर्छन्। यसको मतलब सेयरहोल्डरहरू विषयवस्तुमा हुन्छन् जुन "डबल कर" भनिन्छ। आईआरएस सँग कर्पोरेसनहरूको लागि ट्याक्स कोडको एक अंश हुन्छ, जब तपाईं एक आईआरएस फारम समावेश गर्नुहुन्छ र पूरा गर्नुहुन्छ, जसले करको माध्यमबाट पास हुन दिन्छ, जसमा केही सीमितताहरू पनि छन्, जुन हामी संक्षिप्तमा छलफल गर्नेछौं। IRS फारम 2553 फाईल गर्ने र एस इलेक्शनको लागि आवेदन दिन कसरी संस्थालाई कर लगाईन्छ भनेर परिभाषित गर्दछ। आय कर्पोरेसन मार्फत पारित हुन्छ र नाफा र नोक्सान तब शेयरधारकको व्यक्तिगत कर रिटर्नमा रिपोर्ट हुन्छ। यो एकल स्वामित्व र साझेदारीसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो अनुकूलन करको साथ संरक्षणको लागि कर्पोरेसनको शक्ति समाहित गर्दै केही व्यवसायहरूको लागि ठूलो लाभ हो। सीमितता शेयरधारकहरूको संख्या हो र को / के शेयरधारक हुन सक्छ। सी कर्पोरेसनहरूसँग असीमित रकम बराबरको शेयरधारक हुन सक्छ र अर्को कर्पोरेसन शेयरधारकको रूपमा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि ढोका खोल्न सक्छ, जसले स्टकको स्वामित्व लिन सक्दछ। एस कर्पोरेसनहरू घरेलू व्यक्तिको स्वामित्वमा हुनुपर्दछ र 75 शेयरधारक कुलमा सीमित छन्। साना व्यवसायका लागि प्रायः जसो यो सीमा सीमितता नै हो। संभावनाहरू यो हुन् कि यदि तपाईं 75 सेयरधारकहरू समाहित गर्न र पाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंसँग यो प्रक्रिया अटर्नीहरूको सानो सेनाले गरेको थियो।
कर परिदृश्य तुलना गर्दा
ठीक ब्याट बाट, सीमित देयता कम्पनी सबैभन्दा लचिलो छ जब यो करको कुरा आउँछ, त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्। डिफल्ट रूप मा LLC एकल स्वामित्वको रूपमा कर छ, एकल मालिक LLC को, वा एक साझेदार, बहु मालिक कम्पनीहरूको लागि। निगमहरूलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा एक अलग इकाईको रूपमा कर लगाइन्छ। कर्पोरेसनले आयमा सेयर होल्डरसँगै राजस्वमा आयकरहरू तिर्दछ। एस निगमहरू एक विशेष आईआरएस वर्गीकरण हो जसले सेयरधारकहरूलाई करको माध्यमबाट पारित गर्न अनुमति दिन्छ र यो मात्र कर विधि छ।
जब तपाइँ समावेश गर्नुहुन्छ, समावेशीकरणको एक प्राथमिक सुविधा कर लाभहरू हुन्। कोटीहरूमा आवश्यक व्यापार खर्च घटाउँदा तपाईंको व्यवसाय राजस्वमा समग्र कर काटनेबाट केही राहत प्रदान गर्दछ। कर्पोरेसन र एलएलसीको अनुमति कटौती संग फरक हुन्छ जब यो कर्मचारी लाभ योजनाहरु, सेवानिवृत्ति र स्वास्थ्य सेवा को लागी योगदान को लागी आउँछ। उदाहरण को लागी, कर्पोरेट शेयरधारकहरु अधिकारी स्वास्थ्य योजनाहरु घटाउन सक्छन्, जबकि LLC सदस्यहरु आय को रूपमा योगदान मा आय कर तिर्न। हामी यहाँ अन्तर्निहित इकाई प्रकारहरू र कर वर्गीकरण बीचको आईआरएस कटौतीको साथ एक साइड-साइड तुलना प्रदर्शन गर्न गइरहेका छैनौं, तथापि हामी परिदृश्यको वर्णन गर्नेछौं र तपाईंको लागि समावेशी छनौट गर्दा तपाईंको लागि सही निर्णय लिन ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं। व्यापार
सीमित देयता कम्पनी कर
यो परिदृश्य एक राम्रो बारे मा यो प्राप्त गर्दछ। पूर्वनिर्धारितद्वारा सबै नाफा र नोक्सानहरू व्यवसाय मार्फत यसका मालिकहरूलाई दिइन्छन्, जसले आफ्ना व्यक्तिगत कर फिर्ताको बारेमा रिपोर्ट गर्छन्। यो एकल स्वामित्व वा साझेदारी समान छ। धेरै साधारण कर। LLC ले IRS फारम 8832 तैयार गरेर धेरै अलग कर वर्गीकरणहरूको लागि फाइल गर्न सक्छ। LLC एक कर्पोरेसनको रूपमा करको लागी अप्ट इन गर्न सक्दछ। यसबाहेक, यदि LLC सँग यो चुनाव छ भने, यसले उप अध्याय एस पनि चुनाव गर्न सक्दछ। एक एस निगमको रूपमा कर भइरहेको।
तपाईं किन LLC मा कर्पोरेट कर छनौट गर्नुहुन्छ?
सी कर्पोरेसनहरू वर्षको अन्त्यमा व्यवसायमा बाँकी रहेको नाफामा कर लगाइन्छ। कर दर कर्पोरेसनको हो, एक व्यक्तिको भन्दा कम। यो सम्पत्ति सुरक्षाको लागि एक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, LLC कानूनी प्रावधानहरूले घटनामा कम्पनीको सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्दछ यदि एक सदस्यलाई मुद्दा हालेको छ। कर्पोरेसनको र करको लागि अर्को कुञ्जी यो हो कि तपाईंले एक वित्तीय वर्ष छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं समावेश गर्नुहुन्छ, यद्यपि यो पछि केहि कागजको साथ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो एक महिना हो र तपाइँको कर वर्ष यस महिनाको अन्तिम दिनमा समाप्त हुन्छ। यसले थप लचिलोताको लागि ढोका खोल्छ, ताकि तपाईं व्यक्तिगत आयलाई एक बर्षबाट अर्कोमा बदल्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईं एक एस निगम समावेश गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग पात्रो वर्षको अन्त हुनेछ त्यसैले यो सम्भव छैन। कर्पोरेसनको रूपमा कर लगाउन निगम र एलएलसीको निर्वाचनले करको सम्बन्धमा वित्तीय लचिलोपन बढाउन एक वित्तीय वर्षको अन्त्य मिति छनौट गर्न सक्दछ। निगमहरूले कर्मचारी र तिनीहरूका आश्रितहरूको लागि 100% चिकित्सा खर्च लेख्न सक्दछन्। एक LLC जुन एक कर्पोरेसनको रूपमा कर लगाउन छनौट उही लाभ हो।
तपाईं LLC मा एस निगम कर कसरी छनौट गर्नुहुन्छ?
एस निगमहरू सक्रिय व्यवसायहरूको लागि एक कडा विकल्प हो। निष्क्रिय आय व्यवसायहरू सीमित देयता कम्पनीको लचिलोपनको लागि झुकाव गर्दछन्। एस कर्पोरेसनको क्यालेन्डर वर्ष अन्त्य मिति डिसेम्बरमा हुनेछ, एक व्यक्तिको व्यक्तिगत कर वर्ष अन्त्य मिति जस्तै। यसले शेयरधारकहरूको लागि आफैलाई उचित तलब भुक्तान गर्न र ढोका खोल्दछ र अझै पनि व्यवसायबाट वितरण लिन्छ। वितरण सामाजिक सुरक्षा र चिकित्सा करहरू शून्य छ। यो शेयरहोल्डर वितरण को रूपमा प्राप्त आय मा एक 15.3% बचत हो।
अन्य LLC कर विचार
LLC गठन द्वारा किनेको सीमित देयता यो एक स्पष्ट लाभ हो कि यो प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, त्यहाँ लचिलोपनमा आधारित जबरदस्त फाइदाहरू पनि हुन सक्छन् जस द्वारा LLC लाई कर लगाउन सकिन्छ। एक LLC का सदस्यहरू, "चेक बाकस" विधि मार्फत, आफ्नो LLC या त एक C निगमको रूपमा कर तिर्न छनौट गर्न सक्छन् वा 2553 फाराममा समय द्वारा एस एस निगमको रूपमा फाइल गरेर। पूर्वनिर्धारित रूपमा एक LLC एकल स्वामित्वको रूपमा कर छ यदि यो एकल-मालिक LLC हो, वा साझेदारीको रूपमा यदि यसलाई दुई वा बढी मालिकहरू छन्। सबै विकल्पहरूको जाँच गर्न सकिन्छ कुन विधिले सबैभन्दा ठूलो कर राहत प्रदान गर्दछ। करको विधिलाई बेवास्ता गर्दै कानूनी दायित्व ढाल स्थानमा रहन्छ।
निकाय वर्गीकरण चयन (फाईल 8832 फाइल गर्दै)
IRS ले करको प्रयोजनका लागि LLC उपचार गर्ने तरिकासँग व्यवहार गर्न एक फारम सिर्जना गरेको छ: "बक्सको जाँच गर्नुहोस्" फाराम, फारम 8832। यो LLC सदस्यहरू कसरी उनीहरुको इकाईलाई कर प्रयोजनका लागि व्यवहार गर्न चाहन्छ भन्ने छनौट गर्न अनुमति दिनको एक पटकको जटिल प्रक्रियालाई धेरै नै सरल गर्दछ। दुबै एकल र बहु ​​सदस्य LLC हरू फारम प्रयोग गर्न सक्दछन्। यद्यपि प्राय जसो बहुसंख्यक एलएलसीहरू एस-कर्पोरेसन वा साझेदारीको रूपमा व्यवहार गर्न चाहिन्छ पास-टेक्सनबाट लाभ उठाउनको लागि, यसलाई स्वचालित रूपमा लिनु हुँदैन, एलएलसीको सबै कर वर्गीकरणका सदस्यहरू उत्तम हुन सक्दछन्। 8832 फार्मको सेवा प्रदान गर्‍यो जुन उनीहरूको इकाईमा कर लगाउन चाहन्छन् त्यस प्रकारको एक सकारात्मक चयनको रूपमा।
LLC एक साझेदारी वा S निगमको रूपमा कर छ
एक भन्दा बढी सदस्यको साथ LLCs प्रायः कर उपचार प्रयोजनको लागि साझेदारीको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ, यद्यपि यो जनादेश छैन। एक बहु सदस्य एलएलसी एक सी वा एस निगम को रूप मा मान्न को लागी चुन्न सक्छ, तर यो सी निगम कर उपचार संगै साझेदारी कर उपचार बर्दाश्त पारित को माध्यम बाट कर गुमाउने छ, र यो कति सदस्य हुन सक्छ सम्मान मा सीमित छ। एस कर्पोरेसन करसहित गैर-नागरिक / निवासी एलियन स्वामित्व रोक्दछ। पार्टनर र साझेदारीको ट्याक्सेशन नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक राजस्व संहिताको सबचेप्टर के अधीनमा, तपाईको LLC लाई एक साझेदारीको रूपमा कर लगाउनको लागि चयन गर्दा यो पार्टनर स्तरमा केवल एकल संघीय आयकरमा आधारित हुनेछ, प्रत्येक सदस्यले प्रत्येकको आफ्नो हिस्सा रिपोर्ट गर्ने साथ। LLC को लाभ, घाटा, आय, कटौती, वा उसको व्यक्तिगत कर फिर्ताको मा क्रेडिट।
एस एस कर्पोरेशनको इक्विटी र पूँजी संरचनामा प्रतिबन्धले तपाईंको कम्पनीको लागि रणनीतिक योजनामा ​​लचिलोपनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सीमित गर्न सक्छ, विशेष गरी वृद्धि, स्टक प्रकारहरूमा परिवर्तन, अन्तर-जनवादी व्यापार स्थानान्तरण, आदि। यी प्रतिबन्धहरूमा उदाहरणका लागि हुन्: सी एस कर्पोरेशनसँग 75 सेयरधारकहरू भन्दा बढी हुन सक्दैन, र त्यो शेयरधारकहरू केवल व्यक्ति र सम्पत्तिहरू हुन सक्छन् (केही ट्रस्टहरू, तर अन्य निगमहरू होइन)। अर्को सीमितता यो छ कि एस निगमले केवल एक वर्गको स्टक जारी गर्न सक्दछ, यसरी LLC को एक लचिलोपन सीमित गर्दछ कि यसले स्वामित्व ब्याजको बिभिन्न स्तरहरू हुन सक्छ।
LLC मा सदस्य रुचि को आधार
LLCs का सदस्यहरूको रूपमा कर लगाईएको सदस्यले सामान्यतया उनीहरूको सदस्यता ब्याजको लागि योगदान / भुक्तानीबाट आफ्नो LLC ब्याजमा आधार प्राप्त गर्दछ। प्रत्येक सदस्य वा पार्टनरको साझेदार ब्याजमा आधार हुन्छ जुन यसको सम्पत्तिमा साझेदारीको आधारबाट अलग हुन्छ। साझेदारी ब्याज एक निगम मा शेयर गर्न को लागी एक अलग संस्था मा चासो को रूप मा मानिन्छ। एक सदस्यले धेरै ब्याज कर प्रयोजनका लागि उसको चासोको आधार थाहा पाउँदछ, सहित:
उसको बेच्ने वा घाटा गणना गर्दै जब उसले ब्याज बेच्छ वा त्याग्दछ
LLC बाट एक वितरण मा उसको लाभ वा घाटा गणना गर्दै
LLC द्वारा वितरित सम्पत्तीमा उसको आधार निर्धारण गर्दै
साझेदार घाटा उसले अधिक गर्न सक्नेछ
जब सीमित देयता कम्पनी सदस्यता ब्याज खरीद गरीन्छ, खरीददारले उसको / उनको अप्रमाणित LLC सम्पत्तिको कर आधार बढाउन सक्दछ आन्तरिक राजस्व कोड सेक्सन 754 का आधारमा खरीद मूल्य प्रतिबिम्बित गर्न। "S" वा "C" कर्पोरेट स्टकका खरीददारहरूको लागि त्यस्तै समायोजन प्रावधान उपलब्ध छैन।
सदस्यले सामान्यतया साझेदारी सम्पत्तीको वितरण प्राप्त गर्न सक्दछ बिना लाभलाई मान्यता दिई वा घाटा लिन्छ। वितरण सदस्यता मा उसको चासो को स्तर सम्म सदस्य को लगानी को एक गैर कर योग्य फिर्ता को रूप मा मानिन्छ।
एक सदस्य, तथापि, एक वर्तमान वितरण मा एक लाभ मान्यता यदि यो LLC मा उसको लगानी वा ब्याज को स्तर भन्दा बढी छ। एक पार्टनरले हालको वितरणमा घाटालाई चिन्न सक्दैन, यद्यपि उसले वितरणमा घाटालाई पहिचान गर्न सक्दछ जुन केवल तरल सम्पत्ति, नगद, वा अव्यवस्थित प्राप्य योग्यहरू समावेश गर्दछ। घाटा सदस्यको आधारमा उसको चासो र वितरणको योग बीचको भिन्नतामा सीमित हुनेछ। यी लाभहरू वा घाटाहरू कर प्रयोजनका लागि ठूलो लाभ वा घाटाको रूपमा व्यवहार गरिन्छ।
ठूला योगदानहरूको कर परिणामहरू
एक LLC गर्न नगद योगदान एक निगम वा साझेदारी गर्न नगद योगदान भन्दा धेरै फरक छैन। कुनै नाफा वा नोक्सान पहिचान भएन, र उसले प्राप्त गरेको स्टक वा ब्याजको लागि योगदानकर्ताको आधार सामान्यतया उसले योगदान गरेको नगदको रकम बराबर मानिन्छ। योगदान पुर्‍याउने सम्पत्ति, तथापि, एक उल्लेखनीय फरक प्रभाव छ। एक LLC मा, योगदान सम्पत्तिमा नाफा वा नोक्सान स्थगित हुन्छ जबसम्म कि साझेदारीले त्यस विशेष सम्पत्ति बेच्दैन वा योगदान गर्ने सदस्यले LLC मा उसको वा उसको हिस्सा बेच्छ। योगदान पुर्‍याउने सदस्यले योगदानको समयमा एक लाभ वा नोक्सान पहिचान गर्दैन, चाहे ऑपरेटिंग सम्झौताले अनुमति दिएको उसको स्वामित्वको प्रतिशतलाई ध्यान दिएन। जब LLC ले योगदान गरेको सम्पत्ति बेच्छ, लाभ वा घाटा जुन सुरूमा पहिचान गरिएको थिएन अब मान्यता दिइन्छ र योगदानकर्तालाई दिइन्छ।
यो सीधा विरोधाभास हो स्टक ब्याजको बदलामा सी वा एस निगममा सराहना गरिएको सम्पत्ति स्थानान्तरण। यस उदाहरणमा लेनदेन कर योग्य छ जबसम्म योगदानकर्ताले कर्पोरेसन नियन्त्रण गर्दैन शेयरको कम्तिमा 80% को स्वामित्वको माध्यमबाट।
एक सी निगममा, कर्पोरेसनले कुनै लाभ वा नोक्सानमा कर लाग्दछ जब यो योगदान गरिएको सम्पत्ति खण्डित गर्छ, यद्यपि शेयरधारकहरूलाई त्यहाँ कुनै कर परिणाम हुनेछैन। एउटा एस कर्पोरेसनमा, लाभ वा हानि जुन कर्पोरेसनले मान्यता दिन्छ जब यो सम्पत्तिको निपटान गर्दछ शेयरधारकहरूलाई उनीहरूको शेयर स्वामित्व / लगानीको प्रत्यक्ष अनुपातमा। लाभ वा घाटा योगदान गर्ने शेयरधारकलाई विनियोजन गरिएको छैन।
यी परिदृश्यहरूले उदाहरण दिन्छ कि किन तपाईंको कम्पनीले व्यस्त रहनेछ र कुन कर मोडेलले तपाईंको LLC लाई उत्तम सूट गर्दछ भन्ने व्यवसायको प्रकार बुझ्नको लागि यो किन महत्त्वपूर्ण हो।
LLC आय र घाटाको कर
कर शर्तमा कडाईका साथ बोल्दा, एक LLC, जब एक साझेदारी वा एकल स्वामित्वको रूपमा कर लगाइन्छ IRS को नजरमा अलग कर भुक्तान गर्ने संस्था हुँदैन। प्रत्येक सदस्य अलग र व्यक्तिगत LLC को आफ्नो शेयर मा कर को लागी उत्तरदायी छ (नाफा, घाटा, कटौती, र क्रेडिट)। प्रत्येक सदस्यले आफ्नो कर दायित्वको आफ्नो अंश रिपोर्ट गर्नुपर्दछ, र प्रत्येक कर दायित्व उसले पाएको समान पात्रलाई कायम गर्दछ जब LLC ले कमाएको थियो वा व्यय गरेको थियो। वस्तुहरूलाई सदस्यहरूमा पारित गर्नुको मतलब भनेको आय दोब्बर कर लगाउनबाट जोगिन्छ, र घाटा सदस्यले अन्य स्रोतहरूबाट हुन सक्ने आय अफसेट गर्न सक्दछ।
प्रत्यक्ष कन्ट्रास्टको तुलनामा, एक सी कर्पोरेसन पनि कर प्रयोजनका लागि एक छुट्टै इकाई हो र यस्तो छ, यसको आफ्नै करहरू तिर्नु पर्छ। आय र नाफा कर्पोरेट स्तरमा कर गरिन्छ जब कमाईन्छ, तब लाभांशको रूपमा बिभिन्न शेयरधारकहरूलाई वितरण गर्दा फेरि कर लगाइन्छ। लाभांश सँधै आयको रूपमा कर योग्य हुन्छ, स्रोतलाई विचार नगरि। त्यसकारण, कर्पोरेट मुनाफा वितरण गर्ने क्रममा लाभांश तलब वा बोनसको रूपमा भुक्तान गर्नु फाइदाजनक हुन सक्छ, लाभांशको रूपमा भने यो कर्पोरेसनमा कर छुट छ।
एस निगमहरूलाई साझेदारी जस्ता केही समान फेसनमा कर लगाइन्छ। एक एस निगम मा कायम राखी आय मा कर भार व्यक्तिगत शेयरधारकहरु को माध्यम बाट जान्छ। प्रत्येक शेयरधारकले उसको कर फिर्ताको आयको प्रतिशत अंश रिपोर्ट गर्दछ। जे होस्, आय पुन: विशेषता हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, यदि एस कर्पोरेसनले एक व्यक्ति द्वारा कमाईएको खण्डमा साधारण आयमा कर लगाईएको मुनाफा कमाउँछ भने, एस कर्पोरेसनले आयलाई "शेयरधारकलाई वितरण" को रूपमा तिर्न सक्दछ। जब एक व्यक्तिले यस फेसनमा भुक्तानी प्राप्त गरे, तिनीहरू सामाजिक सुरक्षाबाट बच्न सक्दछन्। र चिकित्सा कर, वर्तमानमा एक 15.3% कर बचत। कसैले एलएलसीसँग एस कर्पोरेसनको रूपमा होशियारीका साथ चल्नुपर्दछ किनभने एसएल निगमको चुनाव भए पनि एलएलसीलाई कर निगमको रूपमा कर लगाउन सकिन्छ, आवश्यकताहरू पूरा नभए पनि यो “नियमित” कर्पोरेसनको रूपमा सञ्चालन हुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि इकाई को एक विदेशी मालिक छ भने यो कर प्रयोजन को लागी एक C निगम मानिन्छ। त्यस्तै, यदि अत्यधिक निष्क्रिय-प्रकारको आय कर्पोरेट सम्पत्तिद्वारा उत्पन्न गरिएको हो वा यदि निगमले लाभमा निर्माण गरेको सम्पत्तिको निस्तारण गर्दछ जब चुनाव एस एस कर्पोरेशन मानिन्थ्यो भने, आईआरएसले एलएलसीलाई सीको रूपमा कर लगाउन उचित देख्न सक्छ निगम
कर्पोरेट सेयरको स्वामित्वमा परिवर्तनले संघीय कर प्रयोजनका लागि "C" वा "S" निगम समाप्त गर्दैन, जबसम्म परिवर्तनले विदेशी मालिकहरू समावेश गर्दैन। किनभने बहु-सदस्य LLC एक साझेदारको रूपमा लिन सकिन्छ, यो IRC सेक्सन 708 (बी) को समाप्ति नियमको अधीनमा छ। एक LLC संघीय आय कर कानून प्रयोजनका लागि समाप्त हुन्छ जब 50% वा अधिक ब्याजको राजधानी र नाफा एक 12 महिना अवधिमा बेचिन्छ। यसको मतलब यो छ कि LLC टेक्निकल रूपमा अझै पनि राज्य कानून अन्तर्गत अस्तित्वमा हुन सक्छ, कर प्रयोजनका लागि, यो समाप्त हुन्छ र पुनः सुरु हुन्छ। यसले लेखा उद्देश्यको लागि नयाँ इकाई स्थापना गर्न समान प्रभाव पार्दछ, र वर्तमान LLC कर वर्षलाई नजिकमा ल्याउँछ।
LLC कर वर्गीकरण
त्यहाँ चार मुख्य तरिकाहरू छन् जुन LLC लाई संयुक्त राज्यमा कर लगाउन सकिन्छ:
एकल स्वामित्वको रूपमा
एक सी निगमको रूपमा
एक एस निगमको रूपमा
यस लेखले सीमित दायित्व कम्पनीले कर लिईएको चार तरिकाहरूको जानकारी र उदाहरण प्रदान गर्दछ। लेख किन अर्को एक मा कर को एक तरीका छनौट गर्न सक्छ को एक सारांश संग समाप्त हुन्छ।
LLC एकल स्वामित्व वा साझेदारीको रूपमा कर लगाइन्छ
पूर्वनिर्धारित द्वारा यदि एक LLC एक सदस्य ("मालिक") छ भने यो एकल स्वामित्वको रूपमा कर लगाइनेछ। त्यस्तै, यदि यससँग दुई वा बढि सदस्यहरू छन् भने यो एक साझेदारीको रूपमा स्वचालित रूपमा कर लगाइनेछ जबसम्म तपाईं अन्यथा निर्वाचित गर्नुहुन्न। जब एकल स्वामित्व वा साझेदारीको रूपमा कर लगाइन्छ, आय र कटौती कम्पनीका सदस्यहरूमाझ प्रवाह हुन्छ। धेरै प्रवाह सल्लाहकारहरूको भनाइमा रियल इस्टेट लगानीकर्ताहरूको लागि त्यस्तो प्रवाह-माध्यम कर अधिमान्य ट्याक्स उपचार हो किनभने करहरूलाई कम गरिनेछ। यो किनभने रियल ईस्टेट कर कटौती र अन्य कर लाभ LLC को मालिकहरु को माध्यम बाट प्रवाह। यसका साथै कम्पनीमा संघीय आयकर हुनेछैन।
यो नोट गर्नु महत्वपूर्ण छ कि कसरी LLC कर लगाईन्छ र यसले कसरी कानुनी तवरले तपाइँलाई जोगाउँदछ भन्ने अलग समस्याहरू छन्। एकल स्वामित्व वा साझेदारीको रूपमा कर लगाइएको LLC ले अझै पर्याप्त कानुनी सुरक्षा प्रस्ताव गर्न सक्छ। जबकि, एकमात्र स्वामित्व र साझेदारी आफैंमा, (त्यस्ता व्यवसायहरू जुन कर्पोरेसन वा LLC को होईन) ले थोरै, यदि कुनै हो भने, व्यवसाय मालिकहरूलाई दायित्व सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
यहाँ एक उदाहरण छ। जोन एक घर जग्गा लगानीकर्ता हुन्। उसले प्रत्येक सम्पत्ती, वा सम्पत्तीहरूको समूहका लागि एक LLC स्थापना गर्दछ। तसर्थ, जब त्यहाँ एक सम्पत्तीबाट उत्पन्न मुद्दा हुन्छ, तब मुद्दाले जोनका अन्य LLC मा सम्पत्तिहरू संलग्न गर्दैन। थप रूपमा, जब जोनलाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा हालेको छ, जस्तै कार दुर्घटनामा जहाँ जोनले आफ्नो बीमा सीमा भन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको छ, त्यहाँ कानूनमा सम्पत्ति संरक्षण प्रावधानहरू छन् कि जोनको कम्पनी भित्रका सम्पत्तिहरू उनीबाट लिनबाट सुरक्षित छन्।
जोन आफ्नो कानुनी निकायहरु द्वारा पेश गरिएको कर बेनिफिट पनि पाउँदछन्। जोनको सम्पत्तिमा घर जग्गा मूल्य घटाउने कटौती उसको व्यक्तिगत कर रिटर्न को माध्यम बाट प्रवाह, आफ्नो व्यक्तिगत आय कर घटाउने। जोनले आफ्नो भाडाको आयमा सामाजिक सुरक्षा (12.4%) वा मेडिकेयर (2.9%) तिर्नु पर्दैन, उसले करमा 15.3% बचत गर्यो। जोनले आफ्नो कम्पनीलाई एक्सएनयूएमएक्स कर स्थगित एक्सचेन्जहरूमा भाग लिन प्रयोग गर्न सक्दछन् जहाँ एक सम्पत्तिको बिक्रीमा उत्पादित नाफा आय करहरू तिर्नु बिना नै एक वा बढी सम्पत्तीमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसो भए, कर सुविधाहरू अक्षुण्ण छन् र जोन आफ्नो सम्पत्तीमा दायित्वबाट उत्पन्न मुद्दाहरूको संरक्षणका थप लाभहरू उपभोग गर्दछन्।
जोन सम्पत्ति संरक्षण पनि पाउँदछन्। उसका सम्पत्तिहरू उचित ढ limited्गले संरचित सीमित दायित्व कम्पनीहरूको स्वामित्वमा छन्। कानुनले यो प्रावधान दिन्छ कि जब जोनलाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा हालेको छ, कम्पनीहरू भित्रका सम्पत्तिहरू कम्पनीहरूको सदस्यबाट लिनबाट जोगिन्छ। त्यसकारण, जब कानुनी दायित्वले उसको व्यक्तिगत जीवनमा प्रहार गर्दछ, सम्पत्ती उसले प्राप्त गर्न कडा मेहनत गरेको सम्पत्ति कब्जाबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
LLC एक "C" निगमको रूपमा कर छ
एक LLC "C" निगम को रूपमा IRS फारम 8832 भरेर "निकाय वर्गीकरण चुनाव" शीर्षक, र कर्पोरेट कर आकार स्थिति को चुनाव गरी कर लिन सकिन्छ। चुनाव भन्छ, "एक घरेलु योग्य इकाई एक निगम को रूप मा कर योग्य एक संघ को रूप मा वर्गीकृत गर्न को छनौट।" LLC मालिकहरु देखि अलग एक निगम को रूप मा कर लगाइनेछ। यसको कर वर्ष समाप्त भएपछि एलएलसीमा रहेको नाफा कर्पोरेट कर दरहरूमा लागु हुने छ, जुन संयोगवश प्रायः व्यक्तिगत कर दरहरू भन्दा कम हुन्छन्। यो अक्सर छनौट गरिन्छ जब ग्राहकले सम्पत्ति सुरक्षा र वित्तीय गोपनीयता चाहान्छ। कम्पनी व्यक्तिगत भन्दा अलग कर लगाइएको छ, आय एक व्यक्तिको व्यक्तिगत कर रिटर्न मा देखा पर्न आवश्यक छैन, सदस्यहरूलाई थप गोपनीयता दिन्छ। यसका साथै, LLC कानूनमा प्रावधानहरू छन् जुन कम्पनीका सम्पत्तिहरू लिनबाट रोकिन्छ जब कुनै सदस्यलाई मुद्दा हाल्छ।
थप रूपमा, C कर्पोरेशनको साथ। कर तपाई क्यालेन्डर बर्ष भन्दा एक वित्तीय वर्ष छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाइँ एक महिना छन जुन मा तपाइँको कर वर्ष समाप्त गर्ने हो, कर वर्ष तपाइँले छान्नुभएको महिनाको अन्तिम दिनमा अन्त्य हुनेछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाइँ मार्चलाई तपाइँको कर वर्ष अन्त्यको रूपमा छनौट गर्नुहुन्छ भने, कर वर्ष प्रत्येक वर्षको मार्च 31 मा समाप्त हुन्छ। धेरै पेशेवरहरूले क्यालेन्डर क्वार्टर छनौट गर्न सुझाव दिन्छन्, जुन त्रैमासिक फाइलिंगसँग मिल्दछ; मार्च, जून वा सेप्टेम्बर, उदाहरणका लागि। क्यालेन्डर बर्षको तुलनामा एक वित्तीय छनौटको फाइदा यो हो कि यसले तपाईंलाई एक कर बर्षबाट अर्को ट्याक्समा पैसा सार्न अनुमति दिन्छ।
उदाहरण को लागी, बेन एक LLC गठन गर्न आदेश दिए। उनले 8832 फारममा सी कर्पोरेसन करको स्थिति चयन गरे र मार्च कर वर्ष अन्त्य छनौट गरे। उसको एक ग्राहक थियो जसले जूनमा ठूलो अर्डर राख्यो जसको परिणामस्वरूप उसको व्यवसायले कमाएको भन्दा than 100,000 अधिक नाफा भयो। अर्को वर्ष, उसले आयमा अतिरिक्त $ 100,000 अपेक्षा गर्दैन। यस बर्ष उनी आफैंलाई उच्च कर कोष्ठमा टाँस्न चाहँदैनन् आफूलाई एक पात्रो बर्षमा तलब वा बोनसको रूपमा पूरै रकम तिरेर।
त्यसो भए, बेनले कर्पोरेट चेकबुक बाहिर आफैलाई एक चेक लेख्छन्a50,000 त्यो वर्षको डिसेम्बर अघि र त्यो रकम उसको व्यक्तिगत आयकरमा थप गर्दछ। उसले आफैंलाई भुक्तान गरेको N 50,000 तलब उसको लागि कर योग्य आय हो र निगमलाई कर-कटौतीयोग्य खर्च हो। बाँकी profit 50,000 अतिरिक्त लाभ को कम्पनी मा रहन्छ।
अर्को बर्षको मार्च भन्दा अघि, उसले आफूलाई कर्पोरेट चेकबुकबाट अर्को चेक लेखेर बाँकी profit 50,000 अधिक नाफाको भुक्तानी गर्दछ। यो कम्पनीलाई लाग्ने कर पनि हो। यसैले, उसले the 50,000 अर्को वर्षको व्यक्तिगत कर रिटर्नमा क्लेम गर्दछ। यदि उसले एक कर बर्षमा उसको व्यक्तिगत आयकर रिटर्नमा सम्पूर्ण $ 100,000 अतिरिक्त आय दावी गरेको भए यसले उसलाई उच्च व्यक्तिगत कर कोष्ठकमा धकेल्नेछ।
त्यसोभए, बेनले आफ्नो निजी कम्पनीको कर तिर्न सीटी कर्पोरेसनको रूपमा प्रयोग गरेको रकमको एक हिस्सालाई अर्को व्यक्तिगत कर वर्षमा सार्न प्रयोग गर्थे। उसले समान पैसा कमाएको छ। तर उसले आफु र उसको कम्पनीको बीचमा अफसेट ट्याक्स प्रयोग गरेको छ र कम पैसा तिर्नको लागि आफूलाई कम व्यक्तिगत आयकर कोष्ठकमा राख्दै करमा छ। उनले आफैंलाई हजारौं डलर आयकर बचत गरे।
अन्तमा, जब एक संस्था एक C निगमको रूपमा कर लगाईन्छ कम्पनीले 100% मेडिकल बीमा र सबै कर्मचारीहरू र तिनीहरूका आश्रितहरूको लागि सम्बन्धित मेडिकल खर्च लेख्न सक्दछ। चिकित्सा बीमा, बीमा कटौती, प्रिस्क्रिप्शन, एस्पिरिन, पट्टिहरू सबै सी निगम मार्फत कटौती गर्न सकिन्छ।
उदाहरणको लागि, निक र बेट्टी जोन्सनको मधुमेह भएको छोरा छ। यो रोगले परिवारको लागि पर्याप्त चिकित्सा खर्च पुर्‍याएको छ। व्यक्तिगत रूपमा, आईआरएसले मात्र तपाईंलाई चिकित्सा लागत घटाउन दिन्छ यदि उनीहरू तपाईंको समायोजित कुल आयको 7.5 प्रतिशत भन्दा बढि छन्। त्यसो भए, चिकित्सा खर्चहरूको पहिलो हिस्सा घटाउन योग्य छैन। मेडिकल खर्च एक ठूलो सीमा मा पुग्नु पर्छ कटौती योग्यता एक व्यक्ति कर फिर्ता मा लात मा पहिले। त्यसो भए ती खर्चहरूको कटौती गर्नमा ठूलो सीमितताहरू छन्। त्यो के हो, त्यहाँ कटौती गर्न सकिने र कटौती गर्न सकिने कुरामा पर्याप्त सीमितताहरू छन्।
यो जानेर, निक र बेट्टीले उनीहरूको व्यवसायको लागि सी निगम स्थिति चयन गरे र कर्पोरेट मेडिकल योजना अपनाए। अब, सबै परिवारका सदस्यहरूका लागि सबै चिकित्सा खर्चहरू कटौतीयोग्य छन्, पहिलो डलरबाट सुरु हुने। अन्य कर सुविधाहरूको अलावा, जोसनले आफ्नो सी कर्पोरेसनको साथ मेडिकल कटौतीमा प्रत्येक वर्ष धेरै हजार डलर बचाउँछन्।
LLC एक "S" निगमको रूपमा कर छ
एक LLC एक "S" निगमको रूपमा कर लिन सकिन्छ, जब 8832 फारममा निगम चुनाव छनौट गरेपछि, IRS कर फार्म 2553 "सानो व्यवसाय कर्पोरेशन द्वारा चुनाव" पछि IRS मा फाइल गरियो। एस निगमको रूपमा कर लगाइएको सीमित देयता कम्पनीका सबै मालिकहरू अमेरिकी नागरिक वा निवासी एलियन हुनुपर्छ। दुर्लभ अपवादको साथ कर वर्ष-अन्त डिसेम्बर हुनुपर्दछ।
एस निगमको चुनावलाई धेरैले सक्रिय व्यवसायका लागि अनुकूलका रूपमा लिन्छन् (निष्क्रिय लगानी व्यवसायको विपरीत) जब मालिकले सबै वा अधिक ब्यापार खर्च गर्न चाहान्छ व्यापार द्वारा। यसको कारण यो छ कि कम्पनीको मालिकलाई भुक्तानी गरिएको “उचित” तलबको अतिरिक्त, शेयरधारकहरूले शेयरधारकहरूलाई “वितरण” को रूपमा आय आर्जन गर्न सक्दछन्। शेयरधारकहरूलाई वितरण सामाजिक सुरक्षा (12.4%) वा मेडिकेयर (2.9%) करबाट मुक्त छन्। त्यसोभए आफूलाई सानो तर व्यावहारिक तलब भुक्तान गरेर र बाँकी कर्पोरेट नाफालाई शेयरधारकहरूलाई वितरणको रूपमा भुक्तान गरेर, कसैले करमा 15.3% बचत गर्न सक्दछ। यो एक अतिरिक्त $ 1530 हो जुन मालिकले आफ्नो जेबमा राख्न सक्दछ हरेक $ 10,000 यस फेसनमा भुक्तान गरिएको।
बिलको केहि कर्मचारीसँग ल्यान केयर व्यवसाय छ। उनले एक कम्पनीको गठन गरीएको छ र S स्थिति IRS फारम 2553 भरेर चयन गर्यो। उसको व्यवसायले उनलाई प्रति वर्ष 100,000 कमाउँछ। उसले आधा N 100,000 को तलबको रूपमा भुक्तान गर्दछ र आधा आधा कम्पनीको शेयरधारकको रूपमा आफूलाई वितरणको रूपमा। त्यसो भए, उसले आफैंलाई भुक्तान गर्छ जुन आईआरएसले उचित तलब मान्दछ, हामी भन्छौं $ प्रति वर्ष 50,000। उसले आफैलाई 2083th र 15th मा 30th मा XNUMX भुक्तान गर्दछ। उसले आफ्नो कर्पोरेट चेकबुक निकाल्छ र आफैंलाई देय चेक लेख्छ। चेकको मेमो सेक्सनमा उसले "वेतन" भन्ने शब्द लेख्छ। ऊ वा पेरोल सेवा उसले भाँडामा लिन्छ र आवश्यक ट्याक्सहरू कटौती गर्छ र उसले आफैंमा चेक लेख्छ।
त्यसो भए उसले बाँकी $ 50,000 लाई शेयरधारकहरूलाई वितरणको रूपमा आफै भुक्तान गर्दछ। आयले अनुमति दिए अनुसार उनी आफ्नो कर्पोरेट चेकबुकबाट वर्षभरि चेक लेख्छन्। उसले आफुलाई धेरै पटक एक महीनामा धेरै पैसा तिर्ने गर्छ। उनी चेकको मेमो सेक्सनमा "वितरण" लेख्छन्। उसले यस आयमा 15.3% स्वरोजगार कर तिर्नु पर्दैन (जसमा 12.4% सामाजिक सुरक्षा र 2.9% मेडिकेयर कर हुन्छ)। त्यसोभए उसले एस चुनाव छनौट गरेर करमा 50,000 X 15.3% = $ 7650 बचत गर्दछ।
त्यसो भए, त्यहाँ चार तरिकाहरू छन् कि एक LLC कर छ। यहाँ साधारण कारणहरू छन् किन कसैले एक प्रकारको कर लगाउँदछन्।
एकल स्वामित्वको रूपमा - जब व्यवसायको एक मालिक हुन्छ।
घर जग्गा भाडा सम्पति को मालिकको लागि
एक व्यवसाय को लागी कि निष्क्रिय लगानी आय जस्तै शेयर, बॉन्ड र म्युचुअल फन्ड।
साझेदारीको रूपमा - जब व्यवसायसँग दुई वा बढी मालिकहरू छन्।
एक व्यवसाय को लागी निष्क्रिय लगानी आय जस्तै शेयर, बॉन्ड र म्युचुअल कोष छ।
वित्तीय गोपनीयता को लागि एक व्यक्तिको व्यक्तिगत कर रिटर्न मा देखा पर्न को लागी व्यापार आय राख्न।
एक व्यक्ति वा उच्च चिकित्सा खर्चको साथ परिवारका लागि
एक सक्रिय व्यवसाय संचालन गर्न।
15.3% स्वयं रोजगार कर (सामाजिक सुरक्षा र चिकित्सा सहित) सेयरधारकहरूलाई वितरणमा बचत गर्न।
समावेशीकरण र कर लाभहरू
अब जब हामीले कर फाइदा र समाहित संस्थाहरू बीचका भिन्नताको मुख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्यौं, हामी यसलाई फिर्ता समेट्नको लागि व्यवसायको प्रकार छनौट गर्न सक्छौं।
LLC को कुनै पनि एकाइ, एकल स्वामित्व, साझेदारी, कर्पोरेसनहरू र S निगमहरूको रूपमा कर लगाउन सकिन्छ। धेरै लचिलो, यसैले जब करलाई समावेश गर्ने क्रममा तपाईंको सबैभन्दा ठूलो कारक हो भने, यो केहि चीज हो जुन तपाईं थप अनुसन्धान गर्न चाहानुहुन्छ, सबै विकल्पहरू यहाँ छन्।
निगमहरू यसको आयसँगै शेयरधारकहरूमा पनि कर लगाइन्छ। यो एक नाफा जस्तो देखिन सक्छ, यद्यपि शेयरधारकहरू कुनै कानुनी संस्था वा व्यक्ति, विदेशी र घरेलु हुन सक्छन् र संख्या असीमित छ।
एस निगमहरूलाई एकमात्र स्वामित्व वा साझेदारीको रूपमा कर लगाईन्छ र निगमलाई अनुमति कटौतीको लागि अनुमति दिन्छ, तथापि स्वामित्वको लचिलोपनको अभाव हुन्छ। एक एस कर्पोरेसनका मालिकहरू कानूनी निवासी वा कानूनी पराई हुन अनिवार्य छ र 75 सेयरधारकहरू भन्दा बढि त्यहाँ हुन सक्दैन। एस कर्पोरेसनको वित्तीय वर्षको अन्त्य मिति डिसेम्बर 31 हो, त्यसैले व्यापार र तपाइँको व्यक्तिगत कर वर्ष एकै दिनमा समाप्त हुन्छ।
तपाईंले समावेश गर्नु अघि, तपाईंले तपाईंको साँचो फोकस जाँच गर्नुपर्दछ। कर सुविधाहरूको लागि समावेशी परिदृश्यहरूको असंख्यको ढोका खोल्छ। तपाईको लागि के सही छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ केहि सामान्य दिशानिर्देशहरु छन्:
कर मार्फत पास: जब एक व्यवसायको एकल मालिक हुन्छ र इकाई प्रकार द्वारा कर मार्फत पास दिइन्छ। यो विचार हो जब त्यहाँ एक निष्क्रिय आय स्थिति होल्डिंग खाताहरू जस्तै, शेयरहरू, म्युचुअल फन्डहरू र बॉन्डहरू। घर जग्गा स्वामित्वको अर्को निष्क्रिय लगानी विचार हो जहाँ तपाईं व्यवसाय समावेश निर्णय गर्नु अघि योजनाबद्ध कर परिदृश्यमा व्यवसाय कटौती र कर्मचारी योजना महत्त्वपूर्ण छैन। यो कसरी एक LLC कर छ, पूर्वनिर्धारित द्वारा, साथै एकल स्वामित्व र साझेदारी।
कर्पोरेट कर: जब एक सक्रिय व्यवसाय आफ्नो सबै या सबै भन्दा अधिक खर्च गर्दछ, यो सिफारिस जब स्वास्थ्य योजनाहरु र योगदान प्राथमिक विचार हो। सम्पत्ति सुरक्षा बढाइन्छ जब एक शेयरधारक कम्पनीमा नाफा राख्न सक्दछ जुन व्यक्तिगत कर रिटर्न वा वित्तीय विवरणहरूमा देखा पर्दैन।
S निगम कर: जब एक सक्रिय व्यवसाय अपरेटिंग र 15.3% द्वारा उसको आम्दानीको अंशमा शेयरधारक कर दायित्व कम गर्ने।
तपाईंको व्यवसाय फारामले तपाईंलाई अहिले कसरी फाइदा पुर्‍याउँछ र जब तपाईं बढ्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। समावेशीकरण र LLC गठनको बिभिन्न चरणहरूमा व्यवसायका लागि बिभिन्न फाइदाहरू छन्। जान्नुहोस् कि कसरी तपाईंको व्यवसाय संरचना तपाईंलाई तपाईं को रूपमा अब र बर्ष पछि समावेश गर्दछ। हामी केहि फाइदा र कसरी LLC ले यसको स्थिति परिवर्तन गर्न सक्दछ तपाईंको व्यवसायको चरणहरूलाई समर्थनमा समाहित गरे पछि कवर गर्नेछौं।
"संस्थाको लाभ र तपाईंको व्यवसायको बृद्धि बुझ्नु आवश्यक छ जब तपाईं कस्तो प्रकारको व्यवसाय समावेश गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ"
हामी आयकरलाई जाँच गर्नेछौं र कर्पोरेसन र एलएलसीले कसरी बिभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्दछन् भनेर तुलना गर्नेछौं। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, लाभका लागि निगमहरूको लागि एक अलग इकाईको रूपमा कर लगाइन्छ। कर संस्थाहरू मार्फत पास गर्नुहोस्, जस्तै सीमित देयता कम्पनी, आफैले करहरू तिर्दैनन्, इकाईका मालिकहरूको व्यक्तिगत आयकर रिटर्नमा दायित्व हुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि एक निगम को व्यापार बैंक खाता मा $ 50,000 नाफा छ, कि योग कर्पोरेट दरहरु मा कर छ। यदि एक LLC कम्पनी मा समान मात्रा मा नाफा छ, मालिकहरु उनीहरुको व्यक्तिगत रिटर्न मा कर दायित्व को लागी जिम्मेवार छन्, चाहे तिनीहरु पैसा बाँड्न, वा छैन।
कर्पोरेट कर को नुकसान
यदि व्यवसायसँग पैसा सulate्कलन गर्न थोरै वा आवश्यक छैन भने कर्पोरेट कर उपचार उत्तम परिदृश्य नहुन सक्छ। कर्पोरेसनले व्यवसायमा रहेका कुनै नाफामा करहरू तिर्नेछ। त्यसोभए यहाँ स्थितिले करको दुई तह प्रस्तुत गर्दछ:
व्यक्तिगत आय कर: शेयरधारकहरू र कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत आयकर रिटर्नमा सबै तलब र वितरणमा आयकर तिर्ने छन्।
कर्पोरेट आयकर: छुट्टै इकाईको रूपमा कर्पोरेसनले व्यवसायमा रहेको कुनै पनि नाफामा कर तिर्नेछ।
कर्पोरेट करको फाइदा
अब हामी आय विभाजनमा जान सक्छौं र कर्पोरेट कर कसरी तपाईंको व्यवसाय बढाउन ठूलो सम्पत्ति हुन सक्छ। जब तपाईंलाई भविष्यको खर्चहरू, जस्तै सूची वा कार्यालयका उपकरणहरूको लागि व्यवसायमा पैसा जम्मा गर्न आवश्यक पर्दछ, कर्पोरेट कर परिदृश्यले तपाईंलाई आईआरएस लिने समग्रमा काट्ने केही बचतको साथ यसो गर्न अनुमति दिनेछ। व्यापार मा example 100,000 शेष लाभ छ जहाँ एक उदाहरण लिनुहोस्। यदि इकाई समावेश गरीएको थिएन वा करको माध्यमबाट पारित गर्न को अधीनमा थिएन भने, त्यो रकम उनीहरूको व्यक्तिगत आयकर रिटर्नमा व्यवसाय मालिकहरूको उत्तरदायित्व हुनेछ र उनीहरूको कर कोष्ठको दरमा कर लगाइनेछ। यदि भविष्यमा खर्चको लागि व्यवसायमा कोष छोडिनु पर्ने हो भने मालिकहरूले आधा नाफा आफैंमा बाँड्न सक्नेछन् र अर्को $ 50,000 कम्पनीमा छोड्नेछन् जुन 15% मा कर लगाइनेछ, कर्पोरेट कर दर। यसले मालिकको पैसा बचत गर्दछ वर्षको अन्त्यमा। याद गर्नुहोस् कि यदि यो एक LLC हो भने सम्पूर्ण $ 100,000 मालिकको व्यक्तिगत फिर्ताको लागि कर लगाइने छ, यो रकम वितरण गरिएको थियो वा थिएन।
LLC कर लाभ
पहिले हामीले यस गाइडमा छलफल गर्‍यौं कि LLC ले यसको कर स्थिति IRS सँग छनौट गर्न सक्छ। तपाईं एक सीमित देयता कम्पनीको रूपमा सम्मिलित हुन सक्नुहुन्छ र करको माध्यमबाट लाभदायक पास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं व्यवसायबाट सबै नाफा लिइरहेका हुन्छन् र जब कुनै फाइदा हुँदैन भने, तपाईं कर्पोरेट कर स्थिति चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले कम्पनीलाई यस्तो स्थितिमा राख्नेछ जहाँ तपाईंको व्यवसायको बिभिन्न चरणको लागि आय विभाजन सम्भव छ।